Nahoana no Avelan’Andriamanitra Hisy ny Fijaliana? | Resadresaka
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabuverdianu Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Myama Ndebele Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Voahirana: Manahoana i Bodo? Salama tsara ve ianao? Faly aho mihaona aminao indray.
Bodo: Salama ka. Izaho koa faly mahita anao.
Voahirana: Manao ahoana izao ny mamanao?
Bodo: Miovaova be ny toe-pahasalamany, fa hoatran’ny mba metimety izy androany.
Voahirana: Tsara kosa izany. Mila miady mafy ianao amin’ny toe-javatra hoatr’izao mba tsy ho kivy.
Bodo: Ie. Indraindray aho lasa saina hoe: ‘Asa, mandra-pahoviana izy no tsy maintsy hijaly hoatr’izao.’
Voahirana: Rariny aloha ianao raha mieritreritra an’izany. Fa noresahintsika tamin’ny farany hoe mahita ny fijaliantsika ve Andriamanitra. * Nilaza ianao tamin’izay hoe tena nanahiran-tsaina anao izany, indrindra hatramin’ny mamanao tratran’ny lozam-piarakodia. Talohan’ny nisarahantsika, dia nanontany aho hoe, raha manana hery hanafoanana ny fijaliana Andriamanitra, nahoana izy no mbola tsy manao an’izany. Asa raha tadidinao iny?
Bodo: Ie, tadidiko.
Voahirana: Fa alohan’ny hamaliantsika an’izay, dia aleo hiverenantsika kely ny hevitra noresahintsika tamin’ny farany.
Bodo: Eny àry e!
Voahirana: Noresahintsika fa na ny olona nanam-pinoana fahiny aza, mba nanontany tena hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny olona hijaly. Tsy nibedy azy anefa Andriamanitra na nilaza hoe tsy ampy finoana ilay olona.
Bodo: Vaovao tamiko mihitsy iny hevitra iny.
Voahirana: Hitantsika koa fa tsy tian’i Jehovah Andriamanitra ny mahita antsika mijaly. Nilaza, ohatra, ny Baiboly fa “ory izy”, rehefa nijaly ny vahoakany. * Tsy mampahery ve ny mahalala hoe malahelo Andriamanitra mahita antsika mijaly?
Bodo: Mampahery tokoa aloha e.
Voahirana: Niaiky koa isika hoe afaka manafoana ny fijaliana ny Mpamorona, na rahoviana na rahoviana, satria manana hery lehibe izy.
Bodo: Izay ange ilay tsy azoko e! Nahoana izy no mamela ny olona hijaly be hoatr’izao, nefa izy manana hery hanafoanana ny fijaliana?
IZA NO NILAZA NY MARINA?
Voahirana: Andeha isika hijery ny bokin’ny Genesisy, mba hamaliana ny fanontanianao. Angamba ianao mahalala ny tantaran’i Adama sy Eva ary ilay voankazo voarara.
Bodo: Efa nianatra an’izay aho tamin’ny sekoly alahady. Efa noraran’Andriamanitra ry zareo mba tsy hihinana tamin’ny voan’ny hazo anankiray, nefa nohaniny ihany ilay izy.
Voahirana: Izay mihitsy. Aleo hojerentsika aloha ny zava-nitranga talohan’izay. Misy ifandraisany be amin’ny antony mahatonga antsika hijaly mantsy izany. Afaka mamaky ny Genesisy 3:1-5 ve ianao?
Bodo: Tsy maninona. “Ary ny menarana no malina indrindra tamin’ny bibidia rehetra nataon’i Jehovah Andriamanitra. Koa hoy izy io tamin-dravehivavy: ‘Marina tokoa ve fa niteny taminareo Andriamanitra hoe tsy tokony hihinananareo ny voan’ny hazo rehetra ato amin’ny zaridaina?’ Dia hoy ravehivavy tamin’ilay menarana: ‘Mahazo mihinana ny voan’ireo hazo ato amin’ny zaridaina izahay. Fa hoy kosa Andriamanitra taminay momba ny voan’ilay hazo eo afovoan’ny zaridaina: “Aza ihinananareo io, ary aza kasihinareo mba tsy ho faty ianareo.”’ Dia hoy ny menarana tamin-dravehivavy: ‘Tsy ho faty velively ianareo. Fa fantatr’Andriamanitra fa amin’ny andro hihinananareo azy io, dia hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy.’ ”
Voahirana: Misaotra anao. Hodinihintsika kely io andinin-teny io. Mariho fa niresaka tamin’i Eva ny bibilava iray. Milaza ny andininy hafa ao amin’ny Baiboly fa i Satana Devoly no niresaka tamin’i Eva, fa nampiasa bibilava izy tamin’io. * Nanontanian’i Satana an’i Eva hoe inona no didin’Andriamanitra momba ny hazo anankiray. Voamarikao ve hoe inona, hozy Andriamanitra, no ho sazin’i Adama sy Eva raha nihinana tamin’ilay izy ry zareo?
Bodo: Hoe ho faty ry zareo.
Voahirana: Izay mihitsy. Hita tamin’ny tenin’i Satana, taorian’izay fa tena nanendrikendrika an’Andriamanitra izy. Jereo ange izay nolazainy e: “Tsy ho faty velively ianareo.” Nilaza i Satana teo fa mpandainga Andriamanitra.
Bodo: Mbola tsy henoko indray izany.
Voahirana: Tsy ho voavaha vetivety izany olana izany, fa mitaky fotoana. Fantatrao ve ny antony?
Bodo: Tena tsy haiko mihitsy.
Voahirana: Aleo àry isika haka ohatra kely. Ahoana raha miteny aminao aho hoe izaho mbola matanjaka kokoa noho ianao? Ahoana no hanaporofoanao fa tsy marina izany?
Bodo: Asiana fanandramana.
Voahirana: Ie. Angamba isika maka zavatra mavesatra, dia jerena hoe iza amintsika sy ianao no mahabata an’ilay izy. Tsy sarotra ny manaporofo hoe iza no matanjaka kokoa.
Bodo: Izany tokoa.
Voahirana: Ahoana anefa raha milaza aho hoe mpamitaka ianao? Tsy hitanao hoe sarotra kokoa ve ny hanaporofo raha marina ny teniko na tsia?
Bodo: Sarotra aloha e!
Voahirana: Tsy ho vitan’ny fanandramana tsotra fotsiny izany.
Voahirana: Tsy ho voaporofo mihitsy izany, raha tsy hoe avela handeha aloha ny fotoana, dia ny olona avy eo no mahita raha mpamitaka tokoa ianao na tsia.
Bodo: Marina izany!
Voahirana: Aleo àry iverenantsika indray ilay tantara tao amin’ny Genesisy teo. Niteny ve i Satana hoe izy mbola mahery kokoa noho Andriamanitra?
Voahirana: Tsy ho sarotra tamin’Andriamanitra mihitsy ny nanaporofo hoe diso i Satana, raha izany. Nilaza kosa i Satana hoe namitaka Andriamanitra. Izao no tiany holazaina tamin’i Eva: ‘Nandainga taminareo Andriamanitra, fa ny teniko no marina.’
Bodo: Hoatran’ny mahaliana izany hevitra izany.
Voahirana: Tena hendry Andriamanitra, ka hitany hoe aleo aloha handeha ny fotoana. Izay no fomba tsara indrindra hamahana an’io olana io. Hazava eny ihany hoe iza no marina ary iza no diso.
Bodo: Koa tsy efa hita ve hoe Andriamanitra no marina, rehefa maty i Eva?
Voahirana: Izay aloha e. Fa tsy izay ihany ny olana napoitran’i Satana. Jereo indray ange ny andininy faha-5 e! Hitanao ve ny tenin’i Satana tamin’i Eva?
Bodo: Nolazainy fa hahiratra, hono, ny masony raha mihinana amin’ilay voankazo izy.
Voahirana: Ie, dia “ho tahaka an’Andriamanitra”, hono, izy ary “hahalala ny tsara sy ny ratsy.” Te hilaza i Satana eo hoe misy zavatra tsara tsy tian’Andriamanitra ho azon’ny olombelona.
Bodo: Hay ve izany e.
Voahirana: Mbola olana lehibe koa izany.
Bodo: Fa ahoana?
Voahirana: Te hilaza i Satana hoe ho tsara kokoa ny fiainan’i Eva, na ny an’ny olona rehetra mihitsy, raha tsy Andriamanitra no mitondra azy ireo. Teto koa, dia hitan’i Jehovah hoe tsara kokoa raha avela hanaporofo i Satana raha marina ny teniny. Noho izany, dia navelany hitondra an’izao tontolo izao aloha i Satana. Izany no mahatonga antsika hahita fijaliana be dia be hoatr’izao, satria i Satana no mitondra an’izao tontolo izao, fa tsy Andriamanitra. * Fa misy vaovao tsara anefa.
Bodo: Hoe ahoana?
Voahirana: Mampianatra an’ity fahamarinana roa ity ny Baiboly. Voalohany, miahy antsika i Jehovah rehefa mijaly isika. Jereo, ohatra, ny tenin’i Davida Mpanjaka ao amin’ny Salamo 31:7. Nijaly be izy fony fahavelony, kanefa mariho ny teniny tamin’izy nivavaka tamin’Andriamanitra. Azonao vakina ve io andininy io, azafady?
Bodo: Tsy maninona. Izao no voalaza eo: “Hifaly sy hiravoravo aho noho ny hatsaram-panahinao feno fitiavana, satria mahita ny fijaliako ianao. Mahalala ny fahoriana manjo ahy ianao.”
Voahirana: Na nijaly aza i Davida, dia nampahery azy ny nahalala hoe mahita ny manjo azy i Jehovah. Mampahery anao ve ny mahafantatra hoe mahalala ny zava-drehetra i Jehovah, na dia ny fijaliana tsy takatry ny olon-kafa aza?
Bodo: Mampahery aloha e!
Voahirana: Ny faharoa indray dia hoe: Tsy havelan’Andriamanitra hitohy mandrakizay ny fijaliana. Milaza ny Baiboly fa hofoanan’Andriamanitra tsy ho ela ny fitondran’i Satana. Hofoanany tanteraka ny zava-dratsy rehetra, anisan’izany ny zavatra nampijaly anao sy ny mamanao. Raha tianao, dia afaka miverina aho amin’ny herinandro, dia hojerentsika hoe nahoana isika no afaka matoky fa hofoanana tsy ho ela ny fijaliana rehetra. *
Bodo: Mety izany.
^ feh. 11 Jereo ilay hoe “Resadresaka Mahaliana: Mahita ny Fijaliantsika ve Andriamanitra?”, tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Jolay 2013.
^ feh. 17 Jereo ny Isaia 63:9.
^ feh. 26 Jereo ny Apokalypsy 12:9.
^ feh. 55 Jereo ny Jaona 12:31; 1 Jaona 5:19.
^ feh. 61 Manazava bebe kokoa an’izany ny toko 9 amin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Misy azy io koa ao amin’ny www.jw.org/mg.